၈လောင်းပြိုင် ဆိုတဲ့ ကားမီးလောင်မှုမှာ အထူးခြားဆုံးတိတ်ဆိတ်နေသူ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ၈လောင်းပြိုင် ဆိုတဲ့ ကားမီးလောင်မှုမှာ အထူးခြားဆုံးတိတ်ဆိတ်နေသူ
၈လောင်းပြိုင် ဆိုတဲ့ ကားမီးလောင်မှုမှာ အထူးခြားဆုံးတိတ်ဆိတ်နေသူ
Apann Pyay 7:07 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
၈လောင်းပြိုင် ဆိုတဲ့ ကားမီးလောင်မှုမှာ အထူးခြားဆုံးတိတ်ဆိတ်နေသူက ဦးဝင်းထွန်းမိန်းမ။ ဒရိုင်ဘာအောင်ခန့် ထွက်ဆိုသမျှ ပုံမလာတာသိပေမယ့် ငြိမ်နေတယ်။ ဦးဝင်းထွန်းမိန်းမ ဘက်ကရောင်းက တောင့်တယ်။ အဖေကလည်း အကောင်ထဲက။ အသိုင်းအ၀ိုင်းက စစ်ဘက်ကပဲ။ ဒါဆို ၀င်းထွန်းမိန်းမက ကြောက်စရာကို မရှိဘူး။ ၀ိတ်နဲ့တောင်ဖိလိုက်လို့ရပေမယ့် သူက လုံးဝ အငြိမ်။ သဘောက လူသတ်မှု မှာ ၀င်းထွန်းမိန်းမက အခရာလား ဘာလား။ ကြားရသလောက် ဦးဝင်းထွန်းက စော်ကြည်ဘဲ။ ပွေတယ်။ ရှုပ်တယ် ။ စော်များတယ်။ စဉ်းစားသုံးသပ်နေတာပါ။
ဟဲလို စီအိုင်ဖီ အဲ.. စီအိုင်ဒီ ဦးကိုနီအမှုလေး တစိတ်လောက်ပလိစ် အောင်ဝင်းခိုင်ကို မိပြီလားခင်ဗျ??? (လိုက်တုန်း) ဟုဟု.. ငါးလောင်းပြိုင်ပြန်ဖော်မယ် ကြားတယ် အခြေနေလေးပလိစ်!!! ( အမှုတွဲဖိုင်တွေ ရှာတုန်း) မင်္ဂလာဒုံလေးလောင်းပြိုင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာလေးကော?? ( စဉ်းစားတုန်း) ၈လောင်းပြိုင်ကားမီးလောင်မှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာကော??? (ဆွေးနွေးတုန်း) ဟုဟုဟု :P :P :P Pyi MoeAung
၈လောငျးပွိုငျ ဆိုတဲ့ ကားမီးလောငျမှုမှာ အထူးခွားဆုံးတိတျဆိတျနသေူ
၈လောငျးပွိုငျ ဆိုတဲ့ ကားမီးလောငျမှုမှာ အထူးခွားဆုံးတိတျဆိတျနသေူက ဦးဝငျးထှနျးမိနျးမ။ ဒရိုငျဘာအောငျခနျ့ ထှကျဆိုသမြှ ပုံမလာတာသိပမေယျ့ ငွိမျနတေယျ။ ဦးဝငျးထှနျးမိနျးမ ဘကျကရောငျးက တောငျ့တယျ။ အဖကေလညျး အကောငျထဲက။ အသိုငျးအဝိုငျးက စဈဘကျကပဲ။ ဒါဆို ဝငျးထှနျးမိနျးမက ကွောကျစရာကို မရှိဘူး။ ၀ိတျနဲ့တောငျဖိလိုကျလို့ရပမေယျ့ သူက လုံးဝ အငွိမျ။ သဘောက လူသတျမှု မှာ ဝငျးထှနျးမိနျးမက အခရာလား ဘာလား။ ကွားရသလောကျ ဦးဝငျးထှနျးက စျောကွညျဘဲ။ ပှတေယျ။ ရှုပျတယျ ။ စျောမြားတယျ။ စဉျးစားသုံးသပျနတောပါ။
ဟဲလို စီအိုငျဖီ အဲ.. စီအိုငျဒီ ဦးကိုနီအမှုလေး တစိတျလောကျပလိဈ အောငျဝငျးခိုငျကို မိပွီလားခငျဗြ??? (လိုကျတုနျး) ဟုဟု.. ငါးလောငျးပွိုငျပွနျဖျောမယျ ကွားတယျ အခွနေလေေးပလိဈ!!! ( အမှုတှဲဖိုငျတှေ ရှာတုနျး) မင်ျဂလာဒုံလေးလောငျးပွိုငျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲလုပျမယျဆိုတာလေးကော?? ( စဉျးစားတုနျး) ၈လောငျးပွိုငျကားမီးလောငျမှု သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲလုပျမယျဆိုတာကော??? (ဆှေးနှေးတုနျး) ဟုဟုဟု :P :P :P Pyi MoeAung